Madaxweynaha Hiiraan State iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo kulmay.
Posted by admin on December 29 2010 19:47:22
Arbaco 29, December 2010 (HSOL)Kulan dhex maray madaxweynaha dowlad goboleedka Hiiraan iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ,iyagoo ka wada hadlay arimo dhawr ah.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Hiiraan oo wadahadal la yeeshay Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ,iyagoo ka dooday arrimaha xiriirka iyo Cayaaraha.
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Hiiraan “Hiran State of Somalia” Dr. Mohamud Abdi Gaab ayaa maanta kula kulmay Gudaha Magaalada Muqdisho Gudoomiyaha G/banaadir ahna duqa Magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur “Tarzan” iyo ku xigeenadiisa , iyagoo ka wada hadlay qaabkii taageero wadajir ah ay u dhexmari laheyd dowladda hoose ee Muqdisho iyo dowlad goboleedka Hiiraan.
Madaxweyne Maxamuud Cabdi Gaab ayaa kala xaajooday Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho sidii suuragal looga dhigi lahaa in si nabad ah loo soo gaarsiiyo xulka cayaartooyda Gobolka Hiiraan , kuwaasoo kooxda Alshabaab ee Baladweyne ku sugan ay ugu hanjabeen ciqaab adag iyo xabsi hadii ay ku soo laabtaan Gobolkaasi .
Arrinkaasi oo welwel xoogan abuurtay ayaa Madaxweynaha Hiiraan State , wuxuu ku qasbanaaday inuu raadiyo waddo nabadeed oo lagu badbaadin karo dhalinyaradaasi , iyadoo xoogga la saarayo sidii aaney ugu dhici laheyn gacanta kooxda mayalka adage e Alshabaab kuwaasoo dib u dhigay horumarkii uu hiigsan lahaa Gobolka Hiiraan.
Talaabadan ayaa waxa ay timid kadib markii xalay Madaxweynaha Hiiraan State uu qadka Teleefoonka kula hadlay Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland General C/samad Cali Shire, iyagoo ka wadahadlay xiriirka walaaltinimo iyo midda maamul ee labada dhinac ka dhaxeysa sidii loo xoojin lahaa , waxaana sidoo kale ay ka doodeen ambabixinta cayaartoydaasi oo laga soo kaxeyn doono Magaalada Garoowe ee xarunta Puntland sida qorshaha yahay .
Isha Warka – Hiran State